Wararkii ugu danbeeyey qasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay Cayaartii Madagascar iyo Senegal? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Wararkii ugu danbeeyey qasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay Cayaartii Madagascar iyo Senegal?
(10-9-2018) Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dadkii dhibaatadu kasoo gaadhay shalay garoon ay ku ciyaarayeen xulalka Madagascar iyo Senegal, halkaas oo dad isjiidhay uu markiiba ku dhintay hal qof, dad kale oo tiradoodu ka badnayd 40 kalena ay ku dhaawacmeen.
Cayaartan oo ka dhacday magaalada Antananarivo ee caasimadda Madagascar, ayaa ka hor intii aanay bilaabanin waxa garoonka hortiisa iskugu yimid dadweyne tiro badan oo doonayey inay gudaha u galaan garoonka si ay ciyaarta u daawadaan, laakiin dhibaatada dhacday ayaa ahayd in garoonka oo lagu magacaabo Stade Municipal de Mahamasina ay albaabada laga galaa yaryar yihiin.
Cayaartan oo ka tirsanayd isreeb-reebka Koobka Qaramada Afrika, ayaa waxa sida dhakhaatiirtu shaaciyeen waxa ku geeriyooday hal qof, laakiin dhaawaca ayaa iyagana qaarkood halis yihiin, gaar ahaan laba qof oo xaalkooda laga dayriyey.
Idaacad laga leeyahay waddanka Faransiiska oo lagu magacaabo RF1, ayaa waxay sheegtay in dadku mar kaliya kusoo xoomeen albaabka garoonka, halkaasna ay ka dhacday isjiidh-dhiidh keenay dhimashada iyo dhaawaca tirada badan.
Dadka qaarkood ayaa ku dooday in albaabada garoonka hal mid oo kaliya la furay, kaasna ay saacado badan u taagnaayeen, waxaana mid ka mid ah oo warbaahinta la hadlay uu yidhi: “Maan fahmin sababta hal albaab oo kaliya garoonka loo furay, iyadoo ciyaar weyn ay jirto.” Sidaas waxa yidhi Henintsoa Mialy Harizafy oo adeerkii ku dhaawacmay garoonka.
Goob-jooge kale oo ku sugnaa garoonka oo lagu magacaabo Rivo Raberisaona, ayaa u sheegay Wakaaladda wararka ee AFP in uu garoonka yimid lixdii subaxnimo, isla markaana uu ku jiray fayl dheer illaa duhurkii oo ah wakhtiga ay dhibaatadu dhacday.
Cayaartan ayaa ku dhamaatay barbar dhac 2-2.